काे-राेनाकाे नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनलाई सामान्य नठानाै, लापरवाही गरे ज्यानै जान सक्छ ! – List Khabar
Home / समाचार / काे-राेनाकाे नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनलाई सामान्य नठानाै, लापरवाही गरे ज्यानै जान सक्छ !
admin January 21, 2022 समाचार Leaveacomment 57 Views
मौसम परिवर्तनको समय शुरु भएसँगै धेरै मानिसहरुमा मौसमी रुघाखोकीको समस्या देखिन थालेको छ। यस सँगै को-रोनको पछिल्लो भेरिएण्ट ओमिक्रोन को संक्रमण पनि द्रुत गतिमा बढिरहेको छ। आम मानिसले आफुलाई भएको संक्रमण मौसमी रुघाखोकी होकी को-भिड संक्रमण छुट्ट्याउन सकिरहेका छैनन्।
यसले अस्पतालमा दैनिक रुपमा रुघाखोकीका बिरामीको चाप बढिरहेको छ। को-रोना संक्रमण भएको त्रा-सका कारण सामान्य रुघा लाग्दा पनि अस्पताल जानेको संख्या बढेको छ। अल्का अस्पताका चिकित्सक डा।रक्षा गौतमले मौसम परिवर्तनले हुने रुघाखोकी र को-भिड संक्रमणमा ज्वरो आए नआएको हेर्नु पर्ने बताईन्।
यदि ज्वरो आएको छ भने सतर्क भएर बस्ने र तुरुन्त चिकित्सकको सम्पर्कमा जाने, थप लक्षण देखिन थालेमा पिसिआर गराउन सल्लाह दिएकी छन्। डा।गौतमले अहिले ओ-मिक्रोनको संक्रमणलाई लिएर आम मानिसमा लापरवाही बढेको बताईन्। ओ-मिक्रोनको संक्रमण ४/५ दिन रहन्छ भनेर लापरवाही गर्न नहुने बताईन्। उनले अ-मिक्रोनसँगको सानो लापरवाहिले ज्या-न नै जान सक्ने बताईन् ।
Previous काठमाडौंमा आजदेखि सवारीसाधनलााई जोर -विजोर लागू
Next टन्सिललाई सामान्य नठान्नुहोस्, यसले तपाईँको ज्या’न लिन सक्छ !